Ganacsatada ayaa hore kala sooc ugu sameeyey lacagta iyadoo lacagta la qaadanayaa tahay shilinka cusub ee Puntland samaysay taasoo saamayn ku yeelatay bulshadda danyarta.
Maamulka Madaxweyne Gaas ayaa markii uu ku filaan waayey in misaaniyada Puntland ka bixiso mushaharka iyo adeegyada kale waxay ganacsto shuraako kula noqdeen makiinad kuwa lacagta lagu daabaco taasoo dhextaal xarunta Bangiga magalaada Bossaso.
Degmada Buhoodle ayaa aasbuucii lasoo dhaafey waxaa ka dhacey dagaal u dhexeeya labo Beelood oo walaalo ah kuwasoo sababey dhimasho iyo dhaawac.
Degaankaan ayaa waxa ku sugan siyaasiyiin kala tagersan Puntland, Somaliland iyo Khaatumo taasoo saameyn ku yeelatey hurumarka gobolka iyo in wax laga qabto arimaha bulshada.
GAROWEONLINE + Khadar Cawl
MUQDISHU, Somalia- Kulan maanta isugu yimadeen Ra'isal wasaraha Somalia, Wasiirka arimaha dibada iyo ku xigeenadiisa ayaa ku soo dhamaadey is-afgarad iyadoo Wararka GO soo gaaraya sheegayaan in mas'uuliyinta wasaarada balan qaadeen in arimahii jirey maalmihii ugu d ...
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Sheekha Al-azhar [Sawiro]
War Saxaafaded 21.08.2017. 18:32